Maxaa haysta dumarka Soomaalida maanta
» Maxaa haysta dumarka Soomaalida maanta
Haweenka oo mara marxalad aad u dhibadan waliba Markey sidaan uurka iyo Markey foolanayaan ayay waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u farabadan.
Haweenka Markey foolanayaan ayay waxaa soo wajaha ama ku dhaca cuduro farabadan oo aan difaac u lahayn jirkooda iyo waliba dhaawacyo kale oo kasoo gaaro dagaalada ka jira magaalada Mogadishu, tiiyoo ay u sii dheer tahay xaaladda adag ee dhinaca nolosha qoysaskooda. Haweenka ku nool magaalada Muqdisho oo had iyo jeeraale iska dhibaatoodo ayaa haddane waxaa u sii dheer nafaqo la’aan, xilliyada qaarkood sababta inay u keenaan cudurro taasina waxaa u sabab ah haweenka oo inta badan ay ka ganacsadaan waxyaabaha laga heli karo nolol maalmeedka kuwaasi oo inta badan ku dhibaatoodo ganacsiga.
Sidoo kale haddii aynu ka hadalno cudurada haleela haweenka markay leeyihiin uurka cuduradaasina waxaa ka mid ah nafaqo dari lasoo daristo waqtigaasi, mararka qaarkoodna ku keento xilliyada ay foolanayaan.
Haddaba warbixinno kala duwan oo aanu ka soo dhaqaatiir dhinaca caafimaadka haweenka, waxay sheegeen inay dhici karto labada sano ee soo socota haween fara badan inay u geeriyoodaan cudurro fara badan, kaddib markii albaabada loo laabay xarumo caafimaad oo lagu kontrooli jiray xilliyada ay uurka leeyihiin.
Haweenka markay kujiraan waqtigaasi waxay u baahan yihiin quudinta haweenka uurka leh loogu talagalay iyadoo aan loo heli karin marxalada kajirta wadankooda owgiis.
haddaba su’aasha taagani waxay tahay side bey u heli karaan iyadoo maalinba maalinta ka dambeyso ay sii sarakaceyso marxalada aadka u foosha xun ee aan loo dulqaadan karin ee ka taagan wadanka Soomaaliya gabi ahaan?.
Meel walbo oo ay kusuganyihiin umada Soomaaliyeed.
Sidee baa xal loogu heli karaa dhibaatada innaga dhextaagani ee aan rajada lahayn?.
Sidee bey hooyooyinka Soomaaliyeedna loogu dhimi karaa dhibaatada haysata?!!.
W/Diyaariyay: Raaxo Maxamed Shariif
E-mail: ruuxeey1@hotmail.com www.rondoon.com